C/laahi Yuusuf ayaa Baydhabo ka Degay Daqiiqada ka hor | maakhir.com
C/laahi Yuusuf ayaa Baydhabo ka Degay Daqiiqada ka hor
February 27, 2008 in Somalia
Baydhabo:- Sida ay sheegeen warar xogo-gaal ah Madaxwayne Yuusuf ayaa la sheegay inuu maanta Galinkii hore ka Degay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Baydhabo,waxa la shaaciyay inuu C/laahi Yuusuf ka soo Boqoolay Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho halkaasi oo ay mudooyinkan ku sugnaayeen Sadex Masuul ee ugu sareeya D.FS.
Wararka ayaa intaasi ku daraya inay diyaarada khaas ah ka qaaday C/laahi Yusuuf Magaalada Muqdisho isaga oo ay warar sheegayaan inay Safarkiisaa ku wahelayaan Xubno ka tirsan Dawlada Federaalka Somaliya walaw aan la sheegin dadkaasi Magacyadooda.
Madaxwayne Yuusuf ayaa markiiba loo Gal biyay Aqalka Madaxtooyada ee Magaalada Baydhabo halkaasi oo uu markiiba Kulamo joogta ah kula qaatay Xubno ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Somaliya,waxa la sheegay inay aad uga wada hadleen Xaalada Guud ee Dalku haatan ku sugan yahay iyo waliba tan u gaarka ah Caasimada Muqdisho ee ay dagaaladu ka Hulcayaan.
Warar dheeraad ah ayaa sheegaya inuu C/laahi Yuusuf Hoolka Baarlamaanka ee A.D.C ku qaban doono shir Balaadhan oo ay Baarlamaanka kaga wada hadlayaan sida ugu haboon ee Dalka looga dhalin karo Xaalada Degenaansho ah iyo waliba sida ugu haboon ee Go Gol wada hadal loogu fidin lahaa Kooxaha ka soo Horjeeda Dawlada Somaliya si loo bad baadiyo Shacabka Somaliya.
Madaxwayne Yuusuf ayaa sidoo kale la filayaa inuu war bixin dheeraad ah siiyo Baarlamaanka Dawlada Somaliya taasi oo ku aadan kulamadii uu la soo qaatay Masuuliyiinta Dalalkii uu dhawaan Lugta soo galiyay iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen oo dhan, walibana Kulamiid ugu danbeeyay ee ay wada qaateen isaga iyo Raisalwasaare Nuur Cadde.
C/laahi Yuusf ayaa dhawaanahan ku suganaa Magaalada Muqdisho ee Caasimada Somaliya halkaasi oo ay Kulamo Xasaasi ah ku dhex mareen Labada Masuul ee kala ah Afheeynka Baarlamaanka Shiikh Aadan Madoobe iyo Raisalwasaare Nuur Cadde.
« Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo wali Badhan ku sugan iyo Dadka oo aad u soo dhaweeyay
Dawlada Kenya ayaa ka Rartay Ciidamadeeda Xuduuda Dalka Somaliya ay la wadaagto »